कसले किन्ला २० हजार रुपैयाँको मास्क ? – Sanchar Patrika
कसले किन्ला २० हजार रुपैयाँको मास्क ?
July 26, 2020 214
कोरोना भाइरस महामारीले पूरै विश्वमा आतंक मच्चाइहेको छ । दुनियामा एक करोड ६० लाख भन्दा धेरै मानिसहरु यो भाइरसबाट संक्रमित भैसकेका छन् भने करीब साढे ६ लाख मानिसको मृत्यु भैसकेको छ ।
यो महामारीले संसारमा मानिसहरुको जिवनशैलीमा परिवर्तन गरिदिएको छ । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाउने कार्यमा अहिलेसम्म सफलता प्राप्त भैसकेको छैन । जहिलेसम्म यो भाइरस विरुद्धको खोप बन्दैन तबसम्म मुख तथा नाक छोप्ने मास्क नै यसबाट बचावटको सबैभन्दा उत्तम उपाय मानिँदै आएको छ । जसका कारण दुनियामा मास्कको व्यापार चम्किएको मात्र छैन यो एक फेसन ट्रेण्ड समेत बन्न थालेको छ ।
विश्वमा अनेक आकार प्रकार तथा डिजाइनका मास्क बनिरहेका छन् । हालै भारतमा सुन जडित मास्क बनेको खबर आएको थियो । महंगो मास्कको भारतीय कदमलाई युरोपेली मुलुक बेल्जियमले पनि पछ्याएको छ । बेल्जियममा यस्ता लग्जरी मास्क उत्पादन गरिएको जसको मूल्य ७५ युरोदेखि १६० युरोसम्म तोकिएको छ । जस अनुसार सबैभन्दा महंगो उक्त मास्कको मूल्य झण्डै २० हजार रुपैयाँ पर्नेछ ।
यद्यपि भाइरसबाट बँच्नका लागि यति महंगो मास्क आवश्यक नपर्ला । तर यो मास्क एक फेसन स्टेटमेन्ट बनिसकेको छ ।
फेसन कपडा तथा एक्सेसरी बनाउने ओलिभिया हेनटले अहिले मास्क बनाउने कार्यमा पनि आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेकी छिन् । उनीले विभिन्न रत्न तथा सिल्क फ्लावर्स जस्ता सामानहरुको प्रयोग गरी मास्क बनाइरहेकी छिन् । ती मास्कको मूल्य न्यूनतम ७५ युरो पर्दछ ।
ओलिभियाका अनुसार यो मास्क दैनिक लगाउनका लागि होइन । कुनै पार्टी, बिहे वा विशेष समारोहका बेला त्यसलाई पहिरिन सकिन्छ । स्मरण रहोस् बेल्जियम हिराका गहनाहरु बनाउनका लागि विश्व चर्चित छ । एजेन्सी
Prevभित्री वस्त्र मात्र लगाएर बिरामीको उपचार गर्ने नर्सले गरिन अचम्मको काम…
Nextआमाबाबु गुमाएकी अमिनालाई १२ कक्षासम्म पढाउने प्रदिप पौडेलले लिए जिम्मा [ भिडियो सहित ]
यूएईमा कोरोना भ्याक्सिनको विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ट्रायल ! नेपाली सहित ३१ हजार जना सहभागी
दर्शन गर्नुहोस् मनोकामना पूरा गर्नुहोस्